Shirkadda Apple ee Pegatron ayaa warshad ka hirgelin doonta dalka Hindiya | Waxaan ka socdaa mac
Shirkadda Apple ee Pegatron si ay warshad uga sameysato dalka Hindiya
Aamusnaan iyo ku dhowaad sagxadda lugta, Apple waxay rabtaa inay joojiso iyadoo ku tiirsan Shiinaha bixinta qalabkeeda. Laba sababood oo aad u muhiim ah. Midka koowaad maxaa yeelay wuxuu ku arkay dhibaatada Covid-19 in aadan ku haysan karin inta badan qalabkaaga bixiya hal wadan sida Shiinaha. Haddii duruuf kasta oo dalku istaago, waad istaagaysaa.
Iyo tan labaad sababo laxiriira xiriirka xun ee hada kajira dowladaha Mareykanka iyo Shiinaha. Mana ahan in Tim Cook uu doonayo inuu ciyaaro ciyaarta Trump, laakiin wuxuu doonayaa inuu iska ilaaliyo bixinta wax badan canshuuraha soo dejinta wax soo saarka wadankaas. Oo haddaba waxaan aragnaa sida Pegatron, oo ka mid ah shirakadaha ugu waaweyn ee iPhone-ka oo dhir badan ku leh Shiinaha, uu mid cusub uga dhisayo Hindiya. Maxaa kadis ah.
Pegatron ayaa isdiiwaangeliyey shirkad hoosaad gudaha Hindiya toddobaadkan, iyada oo ujeedkeedu yahay in ugu yaraan qayb ka mid ah wax soo saarkeeda iPhone-ka laga saaro Shiinaha. Shirkaddu waxay raadineysay goob ku habboon oo ay ku dhisto warshad cusub oo wax lagu shiro dhowr bilood. Waxaa sidoo kale jiray warar xan ah oo sheegaya in Pegatron uu raadinayay inuu ka sameeyo wershad cusub waqooyiga Vietnam.
Pegatron waa midka kaliya ee ka mid ah seddexda shirkadood ee isugu yimaada iPhone-ka oo aan wax xarumo ah ku lahayn Hindiya. Aad u badan Foxconn sida Bistoolad, labada kale ee sameeya iphone-ka, waxay in mudo ah joogeen Hindiya.
«Pegatron wuxuu ka diiwaan galiyay hoosaadkeeda Hindiya gudaha ChennaiSarkaal Hindi ah ayaa u dusay Hindiya Times. "Xilligan, agaasimayaasha shirkaddu waxay wadahadallo kula jiraan dowlad-gobolleedyada kala duwan si ay u helaan dhul ay ka aas-aasaan dhir cusub oo wax-soo-saar ah, intaas ka dibna waxay soo dejin jireen maraakiibta iyo mashiinnada lagama maarmaanka ah."
Mashruuc "Lagu Sameeyay Hindiya"
Dawladda Hindiya waxay si isdaba joog ah u soo bandhigtay dhiirigelin shirkadaha waaweyn ee tiknoolajiyadda iyada oo loo marayo qorshayaasheeda «Waxaa laga sameeyey India«. Waddanku wuxuu rajaynayaa inuu kasbado 190 bilyan oo doolar soo saarista taleefannada gacanta sanadka 2025. Waqtigaan la joogo, dowladda Hindiya waxay heshay 24.000 milyan oo doolar soo saarista taleefannada casriga ah ee noocyada kala duwan.
Sida laga soo xigtay India Times, u-wareegga Apple ee Hindiya sannadka 2019 wuxuu ahaa 1.500 Milyan dollar, oo kaliya wax kayar 1.000 bilyan ayaa uga mahadceliyay soosaarka iphone-ka. Wistron iyo Foxconn waxay soosaaraan iPhone 7 iyo XR gudaha Hindiya. Dalkaas, Apple kaliya waxay leedahay saami suuq ah oo aan gaarin 3 boqolkiiba, laakiin waxay hogaamisaa qaybta taleefannada sare.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Shirkadda Apple ee Pegatron si ay warshad uga sameysato dalka Hindiya
Mustaqbalka AirPods ayaa hagaajin kara codka ku saleysan dhaqdhaqaaqaaga
Wadarta Dagaal: Warhammer II wuxuu si rasmi ah ugu yimid Mac App Store